Posted by Sandakuu on March 15, 2011
စားချင်စဖွယ် ပြင်ဆင်ကွယ် သူငယ်ချင်းတို့ရေ
မျက်မှန်လေး March 15, 2011 at 9:49 PM
TA naing gaw naing ye` larr...dloukamyar gyii...
I love garden,I love plants,so Thank you sister
ချော(အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်) March 16, 2011 at 1:07 AM
နာနတ်သီးက တစ်မျိုးဘဲနော် ချစ်စရာလေးတွေ
ပင်စိမ်းပင်တွေ အများကြီးမြင်ရတာ အားရစရာကြီး
တို့လည်း အပင်စိုက်တာ သဘောကျတော့ ခုလိုမြင်ရတာ ပျော်တယ်..း)
Sunny March 16, 2011 at 3:21 AM
ပျော်စရာကြီးပဲ မမကူးရေ.. ကိုယ့်အခင်းက အပင်လေးတွေ မြင်ရတာကိုက စိတ်ချမ်းသာစရာနော်..
ငွေစန္ဒာ March 16, 2011 at 2:43 PM
ချစ်အုန်းဖေ March 16, 2011 at 4:34 PM
Hydroponic စိုက်နည်းမသုံးဘူးလား။ ကနေဒါခရမ်းသီး look good...
ရွှေပြည်သူ (ShwePyiThu) March 17, 2011 at 9:56 PM
အခုလို စိုက်ခင်းလေးတွေ တွေ့ရတာ ကြည်နူးစရာပါ။ စိုက်ရပျိုးရတာ စိတ်လည်း ကြည်နူးရသလို ကိုယ့်စိုက်ခင်းကထွက်တဲ့ လတ်လတ်ဆတ်ဆတ် ဟင်းသီးဟင်းရွက်လေးတွေ စားရတာလည်း ကျန်းမာရေးအတွက် သိပ်ကောင်းမှာပါ။ အားကျငေးမောသွားပါတယ် ညီမလေးစန္ဒကူးရေ...
Lin March 18, 2011 at 1:35 AM
အဲဒီ မျိုးစေ့တွေ ဘယ်ကရသလဲဟင်
အပင်စိုက်တာ ၀ါသနာပါတယ် ဒါပေမယ့်ဘယ်ကအစေ့ဝယ်ရမလဲမသိလို့ ပါ
အနှိုင်းမဲ့ March 18, 2011 at 3:15 AM
ဖတ်ရတာလဲ အမြင်မှာ ကြည်နူးစရာလေး..း)
သတိတရရှိကြောင်းပါ ကူးကူးရေး)
rose March 18, 2011 at 7:46 AM
အစ်မကူးကူးရေ... စိုက်ခင်းလေးတွေ ကြည့်ပြီး သဘောကျ နေတာ။ ကောင်းလိုက်တာနော်။ ကန်ဇွန်းရွက် အရမ်း ကြိုက်တော့ ကန်ဇွန်းခင်းကြီး ကြည့်ပြီး အပင် စိုက်ချင်စိတ်တွေ တဖွားဖွား ပေါ်နေ မိတယ်။ အသီးအရွက်တွေကို စားသာ စားနေတာ သူတို့ရဲ့ အပင်တွေ ဘယ်လို ရှိလဲ ဆိုတာ သေချာ မသိဘူး။ အခု အစ်မကူးကူး သေချာ ဓာတ်ပုံ ရိုက်ပြမှပဲ သိတော့တယ်။ ကျေးဇူး။
ကကက March 18, 2011 at 11:42 PM
Sandakuu March 19, 2011 at 11:31 PM
မျိုးစေ့တွေက မြန်မာပြည်ကလှမ်းမှာတာပါ။ မြေပဒေသာကျွန်းမှာရောင်းတယ်လေ.. မာမီကအဲဒီကသွားသွားဝယ်တာဘဲ။
ယိုးဒယားပင်စိမ်းလဲ၇ှိတယ်လေ..အဲဒီပင်စိမ်းကြားညှပ်နေတာ..သိပ်မထွားလာသေးဘူး။ ဒါပေမယ့် အဲဒီပင်စိမ်းကိုပိုကြိုက်တယ်။
Here is my website - http://futurecamp.micromusic.net/tiki-index.php?page=UserPagejessicamj
Novices Guide To be able to Projectors
My homepage - relevant
Move Your Wii console System In the Ultimate Activity Experience –5Key Materials
Feel free to visit my webpage - video to mp3 online converter
Basic steps To Improved Home cinema Audio
Feel free to surf to my website :: www.videotomp3.pw
Wonderful Home Cinema On the Budget? Yes It is possible
my homepage; top 10 projectors
Home entertainment system Ideas To get Small Spaces
Polaroid 32" Lcd High definition
Look into my page - restate
The way to Hookup Dvd Home entertainment System
Here is my blog post; grapple
I'm starting upaοnline blog directory and was wondering if I can submіt
your website? I'm trying to mature mƴ directory slowly by haոd so that
it maintаins top quality. I'll make sure aոd put your blog in the
prοper cɑtegory and I'll additiօnally use, "Blogger: စန္ဒကူး" as your aոchor text.
Pleаse make sure to let me know if this is alright with уou by mailing
me at: manuelkilleen@үahoo.de. Bless you
Here is my weblog ... acne no more pdf (acnenomorepdf2014.blogspot.com)